Vaovao - CSM + WRE
E-Glass Chosed Strand Mat dia lamba tsy voarindra izay misy tsatokazo tapatapahana nozaraina tsindraindray miaraka amina binder / emulsion binder.
Izy io dia mifanaraka amin'ny resins UP, VE, EP, PF. Ny sakan'ny horonana dia eo anelanelan'ny 50mm ka hatramin'ny 3300mm, ny lanjan'ireo dia 100gsm ka hatramin'ny 900gsm. Sakany mahazatra1040 / 1250mm, lanja 30kg. Natao hampiasaina amin'ny fametrahan-tanana, ny fantsom-pandrefesana ny filamenta, ny famolavolana famatrarana ary ny fizotran'ny laminatiora mitohy.
1) Famoahana haingana ny styrene
2) Tanjaka avo lenta, mamela ny fampiasana amin'ny fizotran'ny tanana hamokatra faritra lehibe
3) Mando amin'ny alàlan'ny famonoana mando sy haingana amin'ny resina, fanofana rivotra haingana
4) fanoherana ny harafesina asidra ambony
Ny fampiasa farany dia misy sambo, fitaovana fandroana, kojakoja môtô, fantsona mahazaka harafesina simika, fiara mifono vy, tilikambo mangatsiaka ary kojakoja fananganana.
Misy fahasamihafana eo amin'ny hamafin'ny kofehy vita amin'ny kofehy vita amin'ny kofehy vita amin'ny kofehy fitaratra, izay vokatry ny maso samihafa amin'ny lokon'ny vera. Mikasika ny FRP taloha, dia tian'izy ireo amin'ny ankapobeny ny fahatsapana voatetika malefaka, izay manamora ny fametahana ny bobongolo sy ny toeran'ny zorony. Ity dia hevitra mifanipaka. Raha malefaka kokoa, dia midika izany fa somary mena volo na tsy misy residu ny fibra ny tsihy voatetika voatetika, ary tsy misy endrika. Ny vokatra azo soloina dia tsihy voadidy vovoka.
Ny emulsion tsapa dia somary mafy, saingy somary fisaka ilay izy. Ny ankamaroan'ny mpiasa fiberglass dia toy ny emulsion no tsapa satria mora kokoa ny manapaka azy ary tsy manidina na aiza na aiza ny fiberglass.
Indrindra amin'ny tranga maripana ambany dia ho mafy noho ny mahazatra ny fibre fitaratra. Manoro hevitra anao amin'ny ankapobeny ny hisafidiananao an'ity fomba ity: raha ny bobongolo sarotra sy ny firafitry ny vokatra dia misafidy vovoka tsapa ianao mba hilona tsara kokoa, ary mety amin'ny fametahana matevina ihany koa. Ny firafitra lehibe sy malefaka amin'ny famokarana vokatra, ampiasainao ny emulsion dia ho haingana sy mahazo aina kokoa.
E-Glass Woven Rovings dia lamba roa sosona vita amin'ny alàlan'ny roving mivantana. Ny WRE dia mifanaraka amin'ny polyester tsy miangona, vinyl ester, epoxy ary resins phenolic.
1) Ny rovan'ny hena sy kofehy dia mifanaraka amin'ny fomba mifanindry sy fisaka, ka miteraka fihenjanana mitovy
2) kofehy mifanentana tsara, miteraka fahamendrehana avo lenta ary mora ny fikirakirana
3) Mahay mamolavola, mando haingana sy feno amin'ny resina, ka miteraka vokatra be
4) Toetra mekanika tsara sy tanjaka mahery amin'ny faritra
Ny WRE dia fanamafisam-peo avo lenta izay be mpampiasa amin'ny fametrahana tanana sy ny fizotran'ny robot hanamboarana sambo, sambo, fiaramanidina ary kojakoja amin'ny fiara, fanaka sy fanatanjahantena.
Misy santionany maimaimpoana ho an'ny CSM sy WRE. Ny sakany sy ny lanjan'ireo dia azo namboarina. Raha mila fanazavana fanampiny, azafady mifandraisa aminay.